[Tribune] Ukhetho lukaMongameli eTunisia: lapho impikiswano isiphelile - JeuneAfrique.com - Thumela RELAY
Accueil » INQUBOMGOMO »[Tribune] Ukhetho lukaMongameli eTunisia: uma kukhulunywa ngempikiswano - JeuneAfrique.com
[Tribune] Ukhetho lukaMongameli eTunisia: lapho impikiswano isiphelile - JeuneAfrique.com
Akukaze kube khona ezombusazwe ezake zathatha indawo enjalo yabezindaba futhi azikaze nakancane ukuxhumana kube yipolitiki enjalo. Kumithombo yezindaba eningi noma kuwebhu yonkana, izinqubomgomo zikuyo yonke indawo, ngaso sonke isikhathi, njengoba ukungathembi kwazo sekuphelile.
Eminyakeni eyisishiyagalombili ngemuva kwenguquko, ithemba lokubhikisha selinike indlela yokuguqukela ekuguqukeni. Umlingo wezethembiso awusasebenzi: ubushokobezi, ubunzima bezomnotho, ukutshalwa kwezimali emaphethelweni kanye nohulumeni abambalwa sebenele ukwenza izwe elisemthethweni libe yintando yeningi elele embhedeni, ngokuqhathaniswa nentando yeningi yakudala eyalingwa abantu abaningi.
Kulesi isivunguvungu sokukhululwa kwabezindaba kanye nenkulumo, ukuxhumana kwezepolitiki kumenyelwe etafuleni lamandla. Isesekeli eMhlabeni Omdala, sekuphenduke isikhali esikhulu kulabo abafuna amandla. Impi yokhetho ye-2011 jolt nempi ye-2014 yabacwaningi ababedlula lapho. Akusekho eminye imibuzo mayelana nemfundo, ezempilo, ezolimo, i-ecology, ukuguqulwa kwamandla, ngekusasa le-African Union ... Impikiswano yemibono? Isisulu sokuqala sokuxhumana kwezepolitiki.
Isithombe ngokuba "yibhizinisi lezithelo ezinhle", akumangazi ukuthi UNabil Karoui, i-mogul yemidiya nokuxhumana, kuxazululwe ezindaweni eziphezulu zokuvota okhethweni oluzayo. Ngaphandle kwemibono noma ngohlelo, kumenyezelwa ukuhlukunyezwa okumpofu kakhulu kwezenhlalo, abesifazane basemakhaya kanye nabantu abangafundile, okuhlosiwe lapho kukhethwa khona i-chain ebasebenzela kahle. ibhizinisi lokunikela phakathi kweziqephu ezimbili ze-opera yesepha yaseTurkey. Etreyini lakhe, UKaroui udlala iRobin Hood : lowo othatha emadolobheni ukusabalalisa imikhankaso. Lo somabhizinisi waguqula abezindaba waba yingxenye yezepolitiki. Ku-Nessma TV, ukuphindwaphindwa kwezimbangi noma zomfelandawonye weKaroui kwenziwa futhi kungenakuphikiswa.
I-Aïch Tounsi ivelele ezimpilweni zansuku zonke zezakhamizi ezinezigidi zama-dinars asetshenziswa lapho kuthengwa indawo yokukhangisa
Enye i-neo-populist ye-UFO ngesithembiso soshintsho olukhulu ngokuzinzile esimweni sendawo. Ukuqhubekela phambili ngemuva komamaski wokuzibandakanya, i-Aïch Tounsi ivelele empilweni yezakhamuzi zansuku zonke ezinezigidi zama-dinars asetshenziswa lapho kuthengwa indawo yokukhangisa. Izincwadi eziphakanyisiwe ku-Facebook, imibukisoinfotainment okubhalwe phansi futhi kwaguqulwa kwaba yi-infomercial: akekho noyedwa ongabalekela i-hype. AbakwaPoll babikezela ukuthi "usoseshini" uzonikeza izihlalo eziningi okhethweni lomthetho lwe-6 Okthoba.
Kepha abagqangi be-classical njalo bazi ukuthi basebenzise kanjani amaqhinga amadala okuhweba: ukungqubuzana. Abir Moussi Uyadlula. Izinsalela zombuso wakudala, waklebhula indawo yakhe endaweni ebonakalayo ngenkulumo ebukhali nenobuhlakani. Ngendlela kaTrump, uSalvini noma uLe Pen, unesenzo esingabonakali, ifomula eshisayo. Futhi shaya uphawu kukho konke ukubuka kwabezindaba.
Kule carnival yezepolitiki, ukulalelwa ngabavoti sekube ngumsebenzi onzima. The ngokweqile kanye bashing bese ubukeka njengamabhodi wensindiso akhethekile. Akekho umuntu osindisiwe kuma-anathemas. Zonke "amanxusa okulala amaSulumane" noma "ama-henchmen akwa-Israyeli". Nsuku zonke iqoqo lakhe lobuthi. KuFacebook, i-Photoshop montages ingcolisa impikiswano yomphakathi. Ngaphansi kwalokhu kuqubuka umlilo, ukwethembana okuntekenteke phakathi kwezepolitiki nezakhamizi kusabisa ngokuqhekeka. "Calumniate, ukunyundela, kuyohlala kukhona okusalayo," kubhala uFrancis Bacon ngekhulu le-17. Sisekhona.
Ngokuphikisana nale mikhuba, amadoda amabili anokuqonda angachazwa ngokuthi acwebile angamangala. Futhi thatha ngokumelene "nokukhulumisana konke". Ngasohlangothini olulodwa UKaïs Saïed, udokotela osezingeni elifanele othathe umhlalaphansi futhi ongumphathi e-University of Sousse. Kokunye, U-Abdelkrim Zbidi, owayenguNgqongqoshe Wezokuvikela. Ngendlela yabo yokufundisa, bakhanga izithameli ezifundile kakhulu. Kuthunyelwe izikhalazo kubantu abasha abangasebenzi iziqu nabadinga ukulungiswa. Kepha uZbidi, uqinisekisa abaphathi nabadala. "I-anti-com" yabo iwukucabanga kobuqotho phakathi kwabavoti.
Imiphumela yokhetho oluzayo ngeke ixazulule kuphela umbuzo wobuholi bezepolitiki eTunisia. Bazophinde babe nenani lesifundo labakhangisi bazo zonke izinhlobo. Ingabe ukwakheka kabusha kungaba yisizathu sokuphuza? Futhi kungumbuzo ukuthi abaseTunisia bamenywe ukuba baphendule.
Impi yokucwaninga yaseDRC: la macala amathathu enhliziyweni yokuma phakathi kwe-IGF nomongameli - JeuneAfrique.com
Ukhetho lukaMongameli eTunisia - Kaïs Saïed: "Kufanele samukele imithetho yomdlalo, kepha hhayi uhlelo" - JeuneAfrique.com